‘नोट अफ डिसेन्ट’ जंगिए माधव नेपालः केपी ओलीले जे भन्यो त्यही हुन्छ ? — SuchanaKendra.Com
‘नोट अफ डिसेन्ट’ जंगिए माधव नेपालः केपी ओलीले जे भन्यो त्यही हुन्छ ?
पदेश प्रमुख नियुक्तिको सिफारिसलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद भएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफूले प्रस्ताव गरेका व्यक्ति प्रदेश प्रमुखमा नपरेपछि निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । ‘हिजो हामी नेताहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट नाम प्रस्ताव गरेका थियौँ, उहाँले प्रस्ताव गरेका चार–पाँचवटा नाममध्ये एउटा पनि परेन,’ एक सचिवालय सदस्यले भने ।
‘सबै निर्णय ओलीजीले भनेर मात्रै हुने भो, पार्टी एकलौटी भयो भने कसरी हुन्छ,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालयका एक नेताले भने, ‘क्षमतावान् कमरेडहरु जिम्मेवारीविहीन हुने, पटकपटक चुनाव हारेका प्रदेश प्रमुख हुने, यस्तो निर्णय मान्य छैन ।’ नेपालले प्रदेश प्रमुखका लागि विश्वकान्त मैनाली, रघुजी पन्त, वेदुराम भुसाल र श्रीमाया थकालीको नाम अघि सारेका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट